IZIMVO ZEBAR YASEKHAYA -IIMIFANEKISO EZINGAMA-37 ZOYILO EZISISITAYILE - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Izimvo zebar yasekhaya -Iimifanekiso ezingama-37 zoYilo eziSisitayile
Izimvo zebar yasekhaya -Iimifanekiso ezingama-37 zoYilo eziSisitayile
Wamkelekile kwigalari yethu yeengcinga zebar yasekhaya ezinesitayile. Ibha yasekhaya yindawo entle yokudibanisa ii-cocktails zakho ozithandayo ukuze uphumle kwaye wonwabe. Kule galari yoyilo sabelana ngemifanekiso ukukhuthaza, kunye nokubonelela ngezimvo zokuseka ibha yakho yasekhaya.
Ibha yasekhaya eboniswe kumfanekiso ongentla inesitayile kwaye ilula, isebenzisa izinto ezintle ukwenza le bar intle yasekhaya. Iingcango / iifestile ezinkulu zinceda ukuba indawo ibonakale ikhanyayo, ngelixa imhlophe yonke yendlu isenza i-walnut eshushu efudumeleyo yebar ibonakale. Ikhawuntari yebha ngasemva ayinazishelufa zingaphezulu, kodwa endaweni yoko yongeza udonga lwesandi kunye neethayile ezimdaka ngombala / ze beige ezisuka kubude bekhawuntara ziye kufikelela kuphahla.
Iibar zaseKhaya eziBalulekileyo
Ifanitshala, ifanitshala kunye nezinye izinto
Iingcamango zeKhabinethi yeBar yasekhaya
Izimvo zebar emanzi
Iingcamango zeRustic Bar
Igumbi leMidlalo yeBhari
Iingcamango zeBar Basement
Ukuyila iBar yasekhaya
Imilinganiselo esemgangathweni yeBhari yaseKhaya
Iingcamango zeBar Countertop
Ibha yasekhaya esebenzayo nesebenzayo kufuneka ibandakanye zonke izinto eziyimfuneko xa kufikwa kuyilo lwayo. Ukwakha ibha yekhaya kungahlulahlulwa ngokwamacandelo amabini: ukuseta kunye nokugcina impahla. Inxalenye yokumisela ibandakanya uyilo, uyilo kunye nenxalenye yokwakha, ngelixa icandelo lokugcina libandakanya ukuhamba kwezincedisi zebar kunye nesitokhwe sesiselo.
Siqokelele uluhlu lwethu lwezinto ezibalulekileyo zebar yasekhaya ezinokukunceda ufezekise indawo ezonwabisa ngokupheleleyo yendlu yakho, nazi ezinye zezinto zebar yasekhaya enkulu zezi:
Iikhabhathi zokugcina - Iikhabhathi zokugcina azibalulekanga nje ekugcineni ibhiya, iwayini kunye nezinye iziselo, kodwa nokugcina izinto, iiglasi kunye nezinye izinto zebar. Kukulungele ukuba nendawo eyahlukileyo kunye ethile nganye kuba ngaphandle kokuba neemfuno zokugcina ezahlukeneyo, ikwavumela ukuba ujonge ngokulula into oyifunayo.
Xa uyila ibha yakho yasekhaya, faka indawo yokugcina eninzi ukuze ijongeke ngathi ayixinananga. Dibanisa iintlobo ezahlukeneyo zeeyunithi zokugcina ezinje ngeeshelfu, iidrowa, ukutsalwa ukuze ufumane amandla ogcino aphezulu. Gcina ukhumbula ukuba iikhabhathi zakho zokugcina kufuneka zihlale zomile. Xa ugcina utywala kufuneka bugcinwe ngaphandle kwelanga ngqo kwaye kwindawo epholileyo. Unokufunda ngakumbi malunga neekhabhathi zebar zasekhaya njengoko siqhubeka neli nqaku.
Ibha yokuBala - Ibha yasekhaya iqulethe ikhawuntara yomsebenzi kunye nekhawuntara yebha. Ikhawuntari yomsebenzi iphakama ngokulinganayo njengayo nayiphi na ikhawuntari esekhitshini esemgangathweni kwaye isetyenziselwa ukutya kunye nokulungiswa kweziselo, ngelixa ikhawuntara yebar ihlala iphakanyiswa kwinqanaba eliphezulu, isebenza njengendawo yokukhonza iziselo kunye nokutya okuqhelekileyo.
Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha ibhawuntara yebha yekhaya lakho ezizezi zinto, uyilo lwendawo yakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Isikhokelo esisisiseko sokugcina engqondweni kwiibar zokubala zasekhaya kukukhetha into ekuthiwa yi-countertop engazukukrwela kwaye ingafakwanga ulwelo namabala. Uyakwazi ukufumana okungakumbi malunga nezinto eziphathekayo ze-bar countertop, ukujonga ngokubanzi izinto eziluncedo kunye neengxaki kunye nezinye iingcebiso ezifanelekileyo njengoko siqhubeka nale nqaku.
Izitulo zebar -Enye yeempawu eziphambili zebar yasekhaya yindawo yokuhlala. Izinto zokubala zeBar zihlala zinikwa ubuncinci izitulo ezibini ukuya kwezine zokuvumela ukuba zisetyenziswe buqu, ukudibana nosapho okanye ukonwabisa abahlobo.
Izitulo zebha ziphezulu kunezitulo zokutya eziqhelekileyo kwaye zibonelela ngendawo yokuhlala efanelekileyo elingana nobude obude bekhawuntara yebar. Xa ukhetha isitulo sebar yakho yasekhaya, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ukuphakama. Ukuphakama okuchanekileyo kubalulekile, kuba ukuba isitulo sakho sebha sifutshane kakhulu, kuya kuba nzima ukufikelela kwibha, kodwa ukuba iphezulu kakhulu, kuya kufuneka ulale. Ayisiyo kuphela indawo yokuba isitulo sebha inika intuthuzelo, kodwa ikwanceda ekugcineni ifanitshala yokuhlala yakho ilungelelene kwaye ilinganise ukuphakama kwebala lakho.
Izitulo zebar zinokuphakama okuphakathi kweesentimitha ezingama-30, kodwa ngokwesiqhelo zinokubakho ukusuka kwii-intshi ezingama-30 ukuya kwezingama-36 ukusuka emhlabeni kwaye zilungele ukubala okanye imivalo engama-intshi angama-40 ukuya kuma-46 ukuphakama. Ukuze wazi ukuphakama kwesitulo sebha yakho yasekhaya, linganisa ukuphakama kwebala lakho le-bar ukusuka kumgangatho ogqityiweyo ukuya phezulu, emva koko thabatha ii-intshi ezili-10. Ukuphakama kwesitayile esikhokelayo kuya kubonelela ngendawo eyoneleyo yemilenze yakho kwaye kuya kukunika indawo eyaneleyo yokuhamba ngokukhululekileyo nangokuthula.
Inani lezitulo eziya kuthi zikulungele ngokufanelekileyo kwikhawuntara yakho yekhaya liya kuxhomekeka kubude bekhontrakthi yakho. Ukuba ukwakha ibha yekhaya elitsha, oku ngekhe kube yingxaki kuba unokwenza ngokusesikweni kwaye uhlengahlengise ubude bekhawuntala ngokwenani lezitulo zebar ozifunayo. Nangona kunjalo, ukuba ujongana nekhawuntara esele ikho, emva koko ungathatha indlela eya ngasemva ngokwahlulahlula ubude bebonke be-counter nge-intshi ezingama-24 okanye ii-2 iinyawo. Umzekelo, ukuba unendawo yokubala yasekhaya esele ine-6 ​​yeenyawo ubude, oko kuthetha ukuba unokuhlala ngokufanelekileyo kwizitulo zebar ezi-3. Oku kubonelela ngendawo eyoneleyo yokungena nokuphuma ezihlalweni kakuhle okanye ukutya nokusela ngaphandle kokungqubana nomntu olandelayo.
Izitulo zebar ziyafumaneka kwizinto ezahlukeneyo. Abanye banezihlalo ezibotshelelweyo neziphakamileyo ngelixa ezinye zenziwe ngamaplanga, ngentsimbi, ngezinto ezilukiweyo okanye ngeglasi yeglasi. Uyilo lwesitulo sakho sebar luya kuxhomekeka kakhulu kwinkangeleko kunye nesitayile ofuna ukusiphumeza. Kwakhona, khumbula ukuba uhlobo ngalunye lwezinto zalo lunezinto ezintle nezingalunganga, ke yenza uphando oluncinci ngaphambi kokukhetha ukuqinisekisa ukuba ufumana olona mgangatho ulungileyo onokuhlala iminyaka.
Ukongeza kwimilinganiselo efanelekileyo kunye nokuphakama okufanelekileyo, xa ukhetha isitulo sebha yakho yekhaya, qwa lasela ezinye izinto ezifana nentuthuzelo, ukusebenza kunye nokuhonjiswa ngokubanzi kwekhaya lakho.
Ukuseta i-bar counter kwikona ebonisa iikhabhathi ezintle ze-Oak kunye neekhabhathi zokubonisa, zidityaniswe nefriji eyakhelweyo ngaphakathi kunye nefriji yentsimbi engenasici. Ikwanendawo entle yokusithela yeHimalaya emhlophe kunye neoyile exutywe ngeoyile yobhedu kwindawo yokuhlambela.
Ukuhonjiswa kweBar kunye neZinto eziZodwa -Izinto ezincedisayo kunye nezinye izinto ezizodwa zijongwa njengeebhari zasekhaya eziyimfuneko kuba zikunceda ugcwalise ukujonga jikelele kwendawo. Uyila njani ibha yakho inokubonelela nge-ambiance kwaye uzive ufuna kwaye ukuhombisa kwakho kuya kunceda ukuseta ithoni yokonwabisa ekhaya. Ngokusisiseko, umhombiso wendawo yakho yebar kufuneka udibane nalo lonke ikhaya. Ukuhonjiswa kweebar ukusuka kukhanyiso olulula lokukhanya ukuya kwisandi esingqonge iscreen seTV. Ungabandakanya ukuxhoma iiglasi zeso sibuko songezelelweyo okanye ubugcisa bodonga olwenziweyo kunye neminye imihombiso. Ukuhonjiswa kwebar yasekhaya kuxhomekeke kukhetho lwakho lobuqu kwisitayile kunye nokukhetha. Yenza ubuchule kwaye uphonononge.
Ukulayita -Ibar yasekhaya ifuna ukukhanya ngokubanzi, ukukhanyiswa kwemisebenzi kunye nokukhanya kwezivakalisi. Izibane ngokubanzi, ezikwabizwa ngokuba kukukhanya okukufutshane, zibhekisa kowona mthombo uphambili wokukhanyisa ojolise ekukhanyiseni indawo yonke. Ambient okanye ukukhanya ngokubanzi kwemivalo yasekhaya kufuneka kukhuthaze inani elaneleyo lokukhanya kunye nokusasazwa ngokulinganayo kokukhanya. Kwimivalo yekhaya, ukukhanya ngokubanzi kuhlala kugxunyekwe eluphahleni kwaye kuhlala kuphakanyiswe umphezulu. Inokuba kukukhanya kwethontsi okanye ukukhanya kwesandi okanye uthotho lwezibane eziphantsi. Sebenzisa iibhalbhu zokukhanya kwemini ngokukhanya okukuko kwimivalo yasekhaya ukuze ufumane ukukhanya ngokubanzi. Ukongeza, qiniseka ukuba izibane zakho ezikufutshane azinakho ukukhanya.
Izibane zomsebenzi okanye izibane zalapha ekhaya zizinto ezongezelelweyo zokukhanyisa ezisetyenziselwa ukunceda abasebenzisi ekufezekiseni imisebenzi. Ihlala yongezwa kwizithuba apho owona mthombo mkhulu wokukhanya ungonelanga. Eminye imizekelo yokukhanyisa umsebenzi kwimivalo yekhaya iphantsi kwezibane zekhabhinethi. Ngaphantsi kweekhabhathi izibane ziluncedo kwimivalo yasekhaya kuba ziyakunceda ekukhangeleni into oyifunayo ngokukhawuleza. Ngaloo ndlela, unokubona ngokucacileyo i-glassware yakho kunye nezinye izixhobo.
Ukukhanya kwe-Accent kusetyenziselwa ukongeza umdlalo weqonga okanye ukudala imeko kwithuba. Isetyenziselwa ukuqaqambisa okanye ukugxininisa indawo ethile okanye indawo ethile. Ukukhanya kwe-Accent kukwanceda ekuveliseni umoya opholileyo kunye nohlaziyo. Kubalulekile kwimivalo yasekhaya ngakumbi ukuba ufuna ukuphucula imeko okanye wenze umdla obonakalayo. Izibane ze-aksenti zihlala zinombala ofudumeleyo omhlophe okanye otyheli. Imizekelo yezibane ezigxininisayo ezinokusetyenziselwa imivalo yekhaya yimigca yodonga, izibane ezifihliweyo, izibane zezikhukula okanye itotshi.
Izixhobo -Imivalo yasekhaya ihlala ibandakanya izixhobo ezifana neziqandisi ezincinci kunye ne-chiller zewayini zokugcina ezibandayo. Ukuba indawo iyavuma, ungabandakanya i-blender, umenzi wekofu, isitya sokuhlambela izitya, isitovu sokulungiselela amashwamshwam kunye nefriji egcweleyo. Izixhobo zolonwabo ezifana neTV zinokubandakanywa kokonwabisa okongeziweyo. Kulungiselelwe abo baneendawo ezinqongopheleyo, izixhobo zombane wasekhaya ziyafumaneka kubukhulu obahlukeneyo obunokulingana ngokukuko nakwizakhiwo ezincinci. Iicooler wine, umzekelo, zinamandla ahlukeneyo anokubamba inani leebhotile. Ezinye zinokubamba ukuya kwiibhotile ezingama-38 kwaye zibandakanya imimandla emibini yamaqondo obushushu ahlukeneyo. Iifriji zebar zihlala zinobude be-intshi ezingama-20 ukuphakama nge-intshi ezi-17 ububanzi kunye no-18.50 intshi ubunzulu kwaye zinobungakanani beelitha ezingama-50. Izixhobo zombane zingafakwa kwisiseko sekhabhathi.
Amanzi okuntywila kunye nokubaleka -Eminye imivalo yasekhaya ibandakanya isinki yokucoca ngokukhawuleza kunye nomsebenzi wokulungiselela olula. Ibha emanzi lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukuhlamba ngokukhawuleza iiglasi yakho ngaphandle kwesidingo sokuyibuyisela ekhitshini. Ukuba ucwangcisa ukuseta ibar emanzi ekhayeni lakho, qiniseka ukuba indawo leyo ikufuphi kunikezelo lwamanzi kwaye ukuvavanywa kwemibhobho ngamanzi kuhlolwe yingcali.
Amandla / Umbane -Amandla / umbane nazo zizinto ezibalulekileyo zebar yasekhaya kuba kuyacaca ukuba ufuna izixhobo zisebenze. Kuya kubakho ukufikelela ngokulula kunikezelo lombane kwibha yakho yasekhaya. Qiniseka ukuba indawo ineendawo ezaneleyo zokufumana izinto ezincinci ezifana ne-blender okanye umenzi wekofu kunye neendawo ezizodwa zefriji kunye nokupholisa iwayini.
Ukuma simahla kwiBar okanye kwiMini encinci -Oku akuyiyo ibha ebalulekileyo, kodwa yenye yeendlela onokukhetha kuzo ukuba unendawo encinci ekhaya lakho kodwa usafuna indawo yokusela. Imivalo yekhaya ezimeleyo ifumaneka ngokulula kwaye inikezela ngokulula kunye nokuphatheka. Kulabo bajonge ukuthatha ubumnandi bebha yasekhaya ngaphandle ibha ehambayo inokulungela loo mfuno. Ngaphandle kwemivalo yokuma simahla, indlela elungileyo yokuyila ibha yasekhaya kukuyifihla ngokuyiqulatha ngaphakathi kodonga lweendaba. Ikhabhathi elula elula inokubonelelwa ngefriji yebha, igaraji yezixhobo kunye nokugcinwa kweglasi. Yigqibe ngeminyango enokuvalwa okanye ivulwe ngokulula. Ngale ndlela, ibha yakho yasekhaya inokufihlwa xa ingasetyenziswa.
Ifakwe kwikona encinci yendlu, le ndawo yebar ibonelela ngendawo encinci yokuphumla nokusela iwayini. Inezinto zokubala ezinamakhonkco anezinto ezishelelayo zokubonisa ezishelifini ezinoluhlu lweewayini kunye nezinye iibhotile zotywala.
Emva kokumisela ibha yakho yasekhaya usebenzisa uyilo olubalulekileyo, ngoku lixesha lokuba ubeke isitokhwe kwizinto zakho zebar. Izixhobo zebar zizinto ezisisiseko kunye nezixhobo ekufuneka uzigcinile kwibar yakho yasekhaya ukuze iqhubeke isebenza. Ezi zizinto ozifunayo xa ulungiselela iziselo kunye nezinye izinto. Nayi eminye imizekelo yezixhobo zebar zekhaya.
Izinto zeglasi -Iindidi zeglasi zisesandleni ziyacetyiswa ukuba ziyahlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zebar. Ngokwesiqhelo uyakufuna ukugcina uhlobo lweglasi emfutshane, iglasi ende, kunye nesiqu sokuhlangabezana neemfuno zamathuba amaninzi. Ukusetyenziswa kwansuku zonke, ubuncinci iziqwenga ezintandathu ukuya kwezisibhozo zohlobo ngalunye zinokuba sisiqalo esihle. Nangona kunjalo, ukuba uyawathanda amaqela okusingatha kwaye umeme abantu abaninzi ekhayeni lakho, tyala imali kwizibuko ezisibhozo ukuya kwezili-12 zeglasi. Ezinye izinto zeglasi ezinokuba luncedo kwibar yasekhaya zizinto zokuwa, iibhola eziphezulu, iiglasi zebhiya, iiggs, iiglasi zokudubula kunye nomphanda.
Izixhobo zeBarware kunye neeBhartending Ukuxuba isiselo sakho osithandayo kuya kufuna ezimbalwa izixhobo ezifanelekileyo kunye nezixhobo ezisisiseko. Imivalo yasekhaya egcinwe kakuhle ineepuni, izihlukuhli, iitreyini zecube, iingxowa zomkhenkce, izihluzi, iigigger, iiglock shaker, i-muddler, izixhobo zokulinganisa, iimela (zokwenza i-juicing), i-lemon zesters, ii-corkscrews kunye nezivula iwayini.
Utywala Isitokhwe kwiziselo ezinxilisayo kunye neziseko ezimbalwa zebar yakho yasekhaya. Kwabaninzi ifriji yebhiya egcinwe kakuhle kunye nesisele sewayini sinokwenza iqhinga lokubaleka kwi-bar yasekhaya. Nangona kunjalo, kukho ukhetho oluthile lotywala olunokongezwa kwibar yakho yasekhaya. Oku kubandakanya iGin, Tequila, Rum, Vodka, Cognac, Bourbon kunye neWhisky. Kwakhona ukwenza ii-cocktails zakudala, ungasithengisa kwimimoya esisiseko kunye nabaxube abambalwa. Iziphuzo ezininzi zifuna umxube kwaye ezinye zezinto ezithandwayo zibandakanya iklabhu yesoda, itoni, ijinja kunye necola. Ngenye indlela, ungabandakanya iziselo ezingezizo ezinxilisayo kwisitokhwe sakho ukuze ukhethe ngeendlela ezahlukeneyo.
Ibha yakho yasekhaya kufuneka ibe nokugcinwa okwaneleyo kwekhabhathi ukugcina ibha yakho isebenza kwaye ingabinanto. Ibha yasekhaya esebenzayo idibanisa iintlobo ezahlukeneyo zeeyunithi zokugcina ezifana nekhabhathi esisiseko, ikhabhathi engaphezulu, iishelfu ezivulekileyo, iidrowa kunye nokukhupha ukufezekisa amandla okugcina. Izisombululo zokugcina ezicocekileyo ezinjengeishelu yokutsala ikwavumela ukuba wandise yonke intshi yendawo ekhoyo. Ungabandakanya abaququzeleli kunye neebhasikithi zentsimbi zentsimbi ngaphakathi kweenkqubo zakho zekhabinethi zokugcina izixhobo zebar ezihlelwe ngokufanelekileyo.
Rhoqo iikhabhathi zebar zineminyango yeglasi ukuze ubonise iiglasi zakho. Ngaphandle koko, ukuxhoma iiglasi zewayini kunokusetyenziswa kwakhona ukuba ufuna ukubonisa i-stemware yakho kunye nokufikelela ngokulula.
Abo banqwenela ukugcina ibha yasekhaya ikhutshiwe ngaphandle kwamehlo, banokufuna ukukhetha ikhabhathi enendawo efihliweyo ukuze bayigcine. Ukuba ungumntu osela iwayini unokufuna ukukhetha ikhabhathi enendawo enzulu ngokwaneleyo ukulungiselela iibhotile zewayini kumacala abo. Ukukhupha kunye neekhabhathi eziqingqiweyo ezinamagumbi ngamnye nazo zisebenza kakuhle ekubambeni iibhotile zotywala ezingadingi kufriji. I-pantry encinci inokuza ngokufanelekileyo ukugcina izithako ezomileyo okanye izinto zokutya kwi-bar yakho yasekhaya.
Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lwakho, khetha ikhabethe yesiko. Ikhabhinethi yesiqhelo ivumela ukuguqulwa ngokusekwe kwiimfuno zakho ezithile kunye neemfuno. Yonke into ilinganiswe ngokuchanekileyo kwaye ibalwa. Inkqubo yekhabhathi yasekhaya eyenzelwe ukuba yenzelwe ukwandisa indawo ngelixa ivumela iindawo ezithile zokubonisa ukubonisa iiglasi zeglasi kunye nezinto ezizodwa. Nangona kunjalo, ukuba uhlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo, ungoyiki ukuphonononga ezinye iindlela zokugcina kunye nekhabhathi. Ungasebenzisa iikhabhathi ze-prefab okanye ufumane uyilo ngokubuyisela kwakhona ifanitshala endala enje ngeengubo zokunxiba, iiarmoires okanye iinqwelo zebar.
Le bar yasekhaya igcina ilula kunye nekhawuntari enye ende kumthi wePine oqinileyo ukutshatisa imigangatho yeepayini kunye neekhabhathi ezingaphezulu ngeglasi enefriji yesiphelo esifanayo. Isebenzisa itafile yetyuwa nepepile lenyengane ngombala wemibala eyahlukeneyo yeglasi, kunye netafile yecocktail enezitena ezibini zokugqibezela ibha encinci.
Ibha emanzi yasekhaya iseti kunye nesinki kunye namanzi abalekayo ekunikezeleni iziselo kwaye iba sisiseko sokuzonwabisa. Nokuba ufuna indawo yoku-hangout kunye ne-cocktail enxilisayo emva komsebenzi okanye ufuna indawo yokuhlala, le ndawo isendlini inika umoya omnandi wokuphumla. Ibha emanzi yindawo entle yokuba usapho kunye nabahlobo bazame ukungcamla iziselo ezihlaziyayo kunye neendidi ezahlukeneyo zecocktails.
Ibha emanzi nayo iyasebenza xa kuziwa ekucoceni. Kuba kukho isinki onokufikelela kuyo, iiglasi zingahlanjwa kwangoko. Umsebenzi wokulungiselela ukwasebenza ngakumbi kuba ukufutshane nonikezelo lwamanzi kwaye ungenza amashwamshwam ngokulula okanye ubeke amanzi kwiziselo ngaphandle kwesidingo sokubuyela emva naphambili kwikhitshi lakho eliphambili.
Indawo eqhelekileyo yebha emanzi yindawo esezantsi. Imivalo emanzi kulula ukuyakha kwaye inokwenziwa njenge projekthi ngokwakho. Ngokomndilili, ukufaka ibha emanzi entsha kunokubiza i-1400 yeedola ngeprojekthi nganye.
Izimvo zebar ezimanzi zasekhaya eziyimfuneko kuyilo olusebenzayo:
Chonga indawo-Linganisa ngokuchanekileyo ukuba uza kusetyenziswa kangakanani kwisitena sasekhaya kubandakanya ukuba zingaphi izihlalo oza kuzifuna ukulungiselela iindwendwe. Iindawo ezidumileyo zebar yasekhaya zikwigumbi lokutyela, igumbi lesithuba, okanye igumbi lokuhlala. Indawo engaphantsi kukhetho oluqhelekileyo njengendawo ekude nendawo yezithuthi ezininzi ekhaya. Izithuba ezinkulu zinokusebenzisa iikhabhathi ezixhonywe eludongeni zeglasi kunye nendawo yefriji okanye ishawa. Iikhabhathi zinokusetyenziselwa ukugcinwa kwabaxube, iwayini, neebhotile zotywala.
Imibhobho yamanzi emanzi-ibha emanzi iya kufuna imibhobho ukuze isebenze ngokukuko. Iisinki zinokufakwa ngokuthe ngqo kwisiqithi ukuze zicocwe lula. Uyilo apho ukuhlala kungafuneki khona, udonga olumanzi oluseludongeni kunye neekhabhathi zeglasi zinokudityaniswa nesinki engaphantsi kwentaba.
I-backsplash ye-tile -I-backsplash enomtsalane iya kongeza uchulumanco kuyilo kwaye ikuvumele ukongeze ukubamba kwakho.
Iikhabhathi zebhari emanzi-Iikhabhathi ezakhelwe-ngaphakathi ziyimfuneko yokugcina iiglasi, utywala, iimixube kunye nezinye izinto eziyimfuneko. Iikhabhathi zebar ezineengcango zeglasi zikulungele ukubonisa utywala, izinto zokusela, kunye nezixhobo zebar. Olunye uluvo lokugcina olunokusetyenziswa yitafile ephathekayo yeebuffet okanye ishelufu yeencwadi.
Isiqithi sebhari emanzi yasekhaya-Isiqithi sinokunika indawo eyongezelelweyo yokulungiselela iziselo kunye nokushukuma kunye nokuvuselela. Ngesiqithi, ezinye iibarstools zinokubonelelwa ngamava okwenyani ebha yekhaya.
Qwalasela izixhobo zombane- Ifriji encinci enefriji inokukunika umkhenkce ukugcina iziselo zipholile. I-dishwasher inokucoca ngokulula emva kokuba uyenzile.
Le ndawo ibar ibekwe kwicala elinye legumbi yeyona ndawo ifanelekileyo yebha njengoko ibekwe ngqo kufutshane netafile yeephuli. Inemigangatho yeplanga emhlophe yegolide enceda ukuqaqambisa i-mahogany-laminated cabinetry ebomvu. I-counter top isebenzisa i-granite eluhlaza, kwaye i-rack rack ibekwe kwikona yeekhawuntari.
Kwilinge lokunyusa iimbombo ezingaqhelekanga zendlu, le ndawo incinci yebar yakhelwe ukusebenzisa isithuba. Ngaphandle kwendawo yayo engathandekiyo, iwindow enkulu ikhanyisa indawo kakuhle, iyinceda ibonakale iphangalele. Iikhawuntari zakhiwe ngaphakathi nge-oak laminate entanjeni kunye ne-beige countertops eqinileyo, iglasi yokubonisa ishelufu eludongeni olunye kunye nezihlalo zemiphanda eziphakanyisiweyo zebar yokutya / yokusela.
Zininzi iindlela zokwenza isithuba esisezantsi kwezitepsi, kwaye ukusiguqula sibe yibar ekhazimulayo yenye yezona zimvo zigqibeleleyo zokuzisebenzisa. Ikhawuntari yokutya encinci emxinwa enamatye emarmore emhlophe kunye ne-onyx ngaphambili enezikhanyiso ezibekwe ngasemva zibekwe ngokungqinelana nekhawuntara encinci eyakhelwe-ngaphakathi engu-L ngombala oqinileyo omdaka kunye nendawo encinci yesinki.
Le bar encinci yasekhaya kanye ngaphakathi kwiofisi yasekhaya yokukunceda uphumle kwaye ukhulule uxinzelelo. Ineekhabhathi ezibomvu ezenziwe ngomthi kunye neefriji zewayini ezakhelweyo kunye neeshelfu zokubonisa ezimhlophe ezinesipili. Isinki encinci yakhelwe kwikhabhathi ukunceda ngokulungiselela nokucoca.
Ibha yasekhaya ye-rustic inokukubuyisela emva kwixesha langaphambili kwaye wenze indawo yokuphumla wena kunye nemibuzo yakho oyithandayo. Ezinye zeendlela zokuphumeza umtsalane we-rustic kwi-bar yakho yasekhaya kukusebenzisa ikhabethe yokuhombisa ngomsebenzi wokuhambisa umqulu, isitye samatye esityebileyo kunye neendonga ezigxininisayo, kunye neenkuni zendalo kunye namanqwanqwa amatye. Umxholo we-rustic kuyilo lwangaphakathi ngokubanzi ubeka ugxininiso ekugqityweni kwendalo njengokhuni, ilitye lendalo kunye nemithi efunyenweyo.
Imibala kunye neetayitile zidlala indima enkulu ekwenzeni imeko ye-rustic ngemibala engathathi hlangothi enje nge-beige's kunye nebrawuni. Umxholo usebenzisa izinto ezenziwe ngesandla kwaye uhlala unezinto ezixinzelelweyo ezigqityiweyo ngemibala yendalo kunye nezinye iisheyiti zomhlaba. Olunye uphawu lwe-rustic yangaphakathi enomxholo wexesha, i-homepun kunye neediliya.
Ibha yasekhaya ye-rustic inokukubuyisela emva kwixesha langaphambili kwaye wenze indawo yokuphumla wena kunye nemibuzo yakho oyithandayo. Ikhupha ubungqongqo bendalo kunye nokufudumala kunye nokumema. Ukufezekisa oku kujongeka, sebenzisa ukhuni njengowona ugqatso ubalaseleyo kwibar yakho yasekhaya. Ikhabhathi yeenkuni, nokuba kukugqitywa kwendalo okanye amabala atyebileyo anegalelo kwilizwe lakudala elikwi-bar yasekhaya. Ikhabhathi ehombisayo enomsebenzi osongwayo wokukrola kunye neepaneli zikwangumboniso obalaseleyo kwimivalo yasekhaya ephefumlelweyo.
Ezinye iindlela zokuphumeza umtsalane we-rustic kwibhar yakho yasekhaya kukusebenzisa i-flooring yamatye, i-countertops kunye neendonga ezivakalayo. Ukudibanisa ilitye lendalo ngomthi kongeza umahluko kwaye kunegalelo kubunzulu kunye nobukhulu kwibar yakho yasekhaya. Amanye amatye endalo anokusetyenziswa njenge-accents kwimivalo yekhaya ye-rustic lilitye lekalika, isileyiti, igranite kunye nemarble. Inokushiywa ingafakwanga ipholisiwe kwaye iluhlaza ukuba ingagqitywa kwaye indala ive.
Njengoko sele kukhankanyiwe, imibala kunye noburhabaxa budlala indima enkulu ekwenzeni imvakalelo ye-rustic. Ngokuchasene nebha yasekhaya ephefumlelweyo yanamhlanje ebambelela kwiindawo ezigudileyo nezigudileyo, ibha yasekhaya ephefumlelweyo ekhuthazayo ikhuthaza umdlalo kwizinto ezenziweyo. Ikwanombala wombala ongathathi hlangothi, kodwa ngamanye amaxesha unokwazisa imibala egudileyo enzulu kwaye ityebile.
Ukuya kwinkangeleko ye-rustic, le bar esezantsi yasekhaya izama ukulinganisa indawo yokugcina iwayini. Sebenzisa iithayile zelitye zendalo kumgangatho kunye neethayile zokwakha ezindongeni, kudala isibheno esidala kwisithuba kwaye nokudibanisa ukugcinwa kwewayini ngemingxunya yodonga oluphambili lwebar. Indawo ephambili yokuphelisa ibha yenziwe ngeMaple eqinileyo enezinto zokubala zegranite emdaka kunye nezitulo zomthi ezenziwe ngokhuni.
Isilingi ekhethekileyo ye-gothic arc enezitena zeterracotta inika indawo i-aura ekhethekileyo-entle kwaye intle ngaxeshanye. Ikhawuntari ende yebha nayo igqityiwe ngezitena kwaye ine-countertop enobume obukhethekileyo obungqongqo. Nkqu neendonga zommandla ophambili we-bar zisebenzisa ukugqitywa kwezitena, kwaye zisebenzisa izixhobo zokukhanyisa ubhedu zokuthambisa ioyile ukugqibezela ukujonga.
Ilizwe leklasi eliphefumlelweyo lebar lasekhaya elisebenzisa indibaniselwano ebalaseleyo yezixhobo. Isebenzisa iithayile ezijongwa ngokhuni emgangathweni kunye neekhabhathi ezintle zomnatha ezihamba kunye nemiphezulu yeetafile zegreyite ezimnyama. Udonga lugqityiwe ngezitena zeterracotta ukuyinika isibheno esiqhelekileyo kwaye ineseti efanayo yokugcina ukujonga.
Le bar yasekhaya liphupha kubo bonke abathandi bewayini. Iqukethe iiracks zewayini zokuphakama komgangatho ophakamileyo ukuya kwigumbi elihlala kwigumbi lonke, kukho ikhawuntara encinci xa ufuna ukukhonza iwayini kunye netafile encinci ezimbini.
Lo ngumbono omkhulu webar yasekhaya ngakumbi kwabo bafuna ibha yasekhaya kodwa banendawo encinci. Imalunga nesiqingatha semitha enye nesiqingatha ubude kwaye idibanisa iifriji ezimbini zewayini kwikhabhinethi. Ikhawuntari ine-countertop ye-beige granite kwaye ikwasebenza njengendawo yokubonisa iwayini kunye nezinye izinto zasekhaya.
Enye indlela efanelekileyo yokukuthatha ibha yasekhaya kwinqanaba elitsha kukuphucula ibar yegumbi lomdlalo. Ibha yegumbi lomdlalo idibanisa amanqaku ebha, esetyenziselwa ikakhulu ukuhlala kunye nokusela, kunye negumbi lomdlalo, eyona njongo iphambili kukuzonwabisa, ukonwaba kunye nokuzonwabisa. Olu hlobo loyilo, ibha emanzi okanye ibhari eyomileyo inokusetyenziswa, kuxhomekeke kwiimfuno zomninikhaya kunye nezinto azikhethayo. Ngokwesiqhelo, amagumbi omdlalo adityaniswa nendawo yemidlalo yeqonga okanye inkqubo yokonwabisa. Bahlala bexhotyiswe ngetafile yeephuli, itafile ye-ping pong, i-shuffleboard, inkqubo ye-stereo yesandi esingqonge kunye nomabonakude omkhulu. Ukuba idityaniswe nenkqubo yemidlalo yeqonga yasekhaya, ikhonsoli yokudlala nayo iyahambelana noyilo.
Ngokungafaniyo neminye imivalo yekhaya esemgangathweni ehambelana ngokobukhulu, ibha yegumbi lomdlalo ifuna indawo enkulu. Inokuhlala kwigumbi elinye eliphangaleleyo okanye kwezinye iimeko nokuba kwigumbi elingaphantsi okanye kwigumbi eliphezulu. Ukuze usebenzise indawo ngokukuko, uyilo olufanelekileyo kunye noyilo loyilo luyafuneka. Uyilo lwakho kufuneka lucingisiswe ngononophelo, kungenjalo ibar yakho yegumbi lomdlalo iya kujongeka icinezeleke kakhulu.
Kukwalumkile ukuba uqaphele imilinganiselo ebalulekileyo xa uyila ibha yegumbi lomdlalo. Imidlalo kunye nezixhobo zemidlalo zinokuba bulky kakhulu ke ngoko kufuneka zilinganiswe ngokuchanekileyo kwaye zibekwe kwindawo ekhoyo. Iitafile zamachibi, umzekelo, ziza kubukhulu obuqhelekileyo obususela kwi-7 ukuya kwi-9 yeenyawo. Itheyibhile yeephuli zenyawo eziyi-8 ibinomlinganiso wee-intshi ezingama-44 nge-88 intshi, ngelixa iiphuli zechibi zimalunga nee-intshi ezingama-57 ubude. Iimpawu zamachibi kufuneka zithathelwe ingqalelo, ngaphandle koko, umdlali akakwazi ukuhamba ngokukhululekileyo kwisithuba. Ukuba indawo yakho ayivumeli i-suc, ungasoloko uhamba neenketho ezincinci ezinjengeetafile zomoya zehoki, iitafile zebhola okanye imidlalo ye-arcade. Ngenye indlela, itafile yomdlalo inokufakwa kuyilo lwakho ukubonelela ngendawo yokudlala eguqukayo kwimidlalo yamakhadi kunye neminye imisebenzi.
Enye ifanitshala yegumbi lokudlala umdlalo ibandakanya izitulo zokudlala, izitulo zababukeli, izitya zokukhonkotha zabafana okanye iingxowa zembotyi. Izixhobo zinokubandakanya iihupu ezincinci zebasketball kunye nezinye izixhobo zokudlala. Xa kuziwa kwigumbi lomdlalo wokuhonjiswa kwebar, yindawo entle yokubonisa imizobo enemibala, ingqokelela kunye neememorandam kwiqela lakho lezemidlalo olithandayo.
Ezinye zezinto ekufuneka ziqwalaselwe ekuyileni ibha yegumbi lomdlalo ziintambo ezaneleyo kunye neendawo ezisebenza ngokulula zezinto zombane, iinkqubo zokufudumeza nokupholisa, izibane, i-acoustics kunye nezinto ezilungileyo zomgangatho ofana nekhaphethi okanye umthi onzima. Ukuba ucinga ukufaka i-TV yesandi esingqonge ibha yegumbi lakho lomdlalo, thintela indawo egudileyo nebonakalisayo, kodwa endaweni yoko yiya kwikhaphethi yomgangatho kuba isebenza kakuhle ngobungqina besandi. Ngokubanzi, imivalo yegumbi lomdlalo yindawo entle yokudibana nabahlobo kunye nosapho.
Le bar yanamhlanje kunye negumbi lezemidlalo lisonga iifestile ngombono omangalisayo wangaphandle kunye nesixeko esikufuphi. Ibha yanamhlanje ixhotywe ngetafile yentsimbi engenazintsimbi kunye nezitulo zebar zesilivere. Igumbi lokuphumla yindawo efanelekileyo yokuphumla kunye necocktails kwaye uphumle kwisingqengqelo sombala wekrimu okanye kwizitulo zeetro. Umgangatho otyebileyo weenkuni ugijimela kwisithuba kwaye itafile yeephuli inika ithuba lokuzonwabisa.
Izimvo ezininzi zebar yasekhaya zivela kwisidingo sokwenza igumbi lokuzonwabisa kwaye liyenze indawo efanelekileyo yokuphumla nokonwabisa iindwendwe zakho. Ngendawo enkulu, eli gumbi liyakwazi ukulingana kwindawo enamaplanga egobileyo esebenzisa iikhabhathi zelnut. Ngaphandle kwebhari inendawo yokuhlala eyi-1, itafile yedama kunye nendawo encinci yokutya / ye-snack.
Eli gumbi lomdlalo aligqibekanga ngaphandle kwesi sibali sincinci sebha. Ukutshatisa inkangeleko yanamhlanje yendawo, indawo yebar ithatha indawo encinci, inodonga olwakhiwe kuphela olunendawo yokubeka into emnyama egudileyo kunye nezihlalo ezine zebar. Ngokwenene yindawo nje yokuhlala ibhari apho ungasela okanye utye khona, kodwa akukho bhari yokwenyani ecaleni kwayo.
Le bar yegumbi lomdlalo ixhotyiswe ngokupheleleyo ngebha yekona enezitulo zebar ezihlala ezintathu, itafile yedama, oomatshini bokufaka kunye netafile yecraps. Isilingi emnyama efihliweyo kwi-mahogany emnyama idala ubuhle kunye nesiphelo esiphakamileyo. Ukuhonjiswa ngemizobo yobugcisa enemibala ecaleni kweendonga, ukukhanya okufihliweyo kunye nokukhanya kwendalo kwefestile, kunceda ukugcina imeko yeli gumbi liqaqambile kwaye limnandi.
Ibha engaphantsi yeyona ndawo ifanelekileyo yokwenza igumbi elinesimbo sakho. Ukusukela ekubeni ikhutshiwe kwiindawo eziphezulu zezithuthi ngaphakathi kwekhaya lakho isiseko esingaphantsi sinokuba sesona sigqibeleleyo sokuyila isisele sewayini esirhabaxa okhe wafuna, okanye wenze ibha yanamhlanje kunye negumbi lezemidlalo. Esinye isizathu sokuba amagumbi angaphantsi ahlala eguqulwa abe yimivalo yekhaya kungenxa yendawo ebanzi abayinikelayo. Inika indlela entle yokusebenzisa igumbi elingasetyenziswanga ekhaya.
Ngaphambi kokuba ujike kwigumbi lakho elingaphantsi kwindawo ye hangout, kukho amalungiselelo athile ekufuneka enziwe. Okokuqala, cinga ngokugqiba igumbi lakho elingaphantsi. Vavanya iimeko ezikhoyo ezinje ngomgangatho, udonga nophahla. Faka endaweni yezahlulo ezifuna ukubuyisela nokulungisa ezonakeleyo. Emva koko, ngoku unokuthatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwebar esezantsi oyifunayo ekhayeni lakho. Unokukhetha ibar elula emanzi okanye eyomileyo, kodwa ukuba unayo indawo efanelekileyo, emva koko uyiguqulele kwigumbi lomdlalo okanye indawo enobuhlobo yosapho enokhetho oluninzi lokuzonwabisa.
Imivalo engaphantsi inokuba nomxholo osesikweni okanye umxholo oqhelekileyo. Imivalo engaphantsi esesikweni ibonakalisa ukugqitywa okunethezeka njengokhuni okanye ilitye lendalo, iinkcukacha ezintle ezifana neepaneli kunye nenkqubo yombala efihlakeleyo. Imivalo engaphantsi eqhelekileyo ine-ambiance ebekiweyo ngakumbi kwaye ayomelele okanye ibukeke. Uyakwazi ukuyila ibha yakho engaphantsi usebenzisa isitayile sendabuko okanye isitayile sangoku, kuxhomekeke kukhetho lwakho. Olunye uqhelaniso oludumileyo lweebha ezingaphantsi yimidlalo yemivalo yekhaya. Ngokwesiqhelo, imivalo engaphantsi kwesi sizobo ibonisa izinto zokuhombisa kwimidlalo. Lo ngumthombo wolonwabo ngakumbi kwabo bangabalandeli bamaqela ezemidlalo athile.
Indawo elula engaphantsi kwebar engahambeli ngaphaya komhombiso obukekayo. Inika ikhawuntara yobume be-L ekugqityweni kweenkuni ze-Oak nge-counter ephezulu eyenziwe kwibhodi yeFicem eyakhiweyo kwaye yafakwa izinto ezifanayo zegranite njengeyona counter iphambili. Iwayini kunye nezinye iziselo zigcinwa ngaphakathi kwindawo yokugcina iishelfu ezenziwe ngomthi ezakhiwe ngeendlela ezahlukeneyo.
Indibaniselwano ehambelanayo yeklasikhi kunye neyangoku, le bar esezantsi yasekhaya lulongezo olugqibeleleyo kuyo nayiphi na indawo yokuzonwabisa. Ibekwe ecaleni kwetafile echibini kwisithuba esigqityiweyo esimhlophe esimhlophe, ukugqitywa okuhle kweekhabhathi eziqinileyo ezisetyenziselwa indawo yebar kubonakala. Ifriji enkulu yewayini inokubonwa kwaye i-2 iiracks ezinkulu zakhiwe ngaphakathi kwiikhawuntari ezingaphezulu. Inezitena ezintathu zomthi eziqinileyo ezinomqolo obuya emva kwisitulo sepikoko.
Ngendawo enkulu yomgangatho ekhoyo, le bar yekhaya ihlala kwindawo enkulu kwaye ikufutshane nendawo yokuhlala. Indawo yokutyela / yokusela yenziwe nge-gypsum eyakhiweyo kunye negranite emnyama ephezulu kwaye ngasemva kwayo kukho izixhobo zokubala zasekhitshini. ngetafile yegranite emnyama. Inefriji enye yewayini ende kunye nefriji kaNorman eyakhelwe-ngaphakathi kwiziphelo ezichaseneyo nekhawuntari yangasemva.
Le bar yekhaya iqhagamshelwe kwikhitshi evulekileyo yendlu kwaye ivulekele nakwezinye iindawo zendlu. Iithayile zeceramic zokugqiba iinkuni emgangathweni kunye neetayile zendalo zamatye kumphezulu webar yesetyhula yongeza isibheno se-rustic kunye nelizwe kwisithuba. Indawo yokubala engemva ineekhabhathi zelaminethi mahogany-kunye nelitafile yegranite emnyama.
Exhotyiswe ngephuli yangaphakathi / i-spa, eli khaya lithatha inotshi kwaye likwabandakanya ibha ehambayo ecaleni. Ibha ine-eye-catching brashi egqityiweyo yentsimbi engenasici kwifom setyhula kwaye inezitulo ezintathu zala maxesha zokutshatisa.
Le bar yasekhaya iphefumlelweyo yinkqubo ethatha inqanaba lasekhaya kuyilo lwasekhaya kunye neekholamu zomthi eziqinileyo ezakha indawo yebar. Ikhawuntari yebha inee-slats ezithe nkqo ezenziwe nge-oki eqinileyo kwaye zine-slab eshinyeneyo yamatye e-quartz. Ngaphambili uya kuqaphela amakhonkco amabini obomi beediliya njengezincedisi.
Ibha eyahlukileyo ehambayo ngaphakathi kwigumbi lomdlalo elenziwe ngoqalo oluqinileyo ngokugqitywa kwe-varnish. Ibha yeselfowuni yenziwa kuphela ngokudityaniswa kokwahlulwa kunye noqalo oluqinileyo kwaye inezibini ezilinganayo ze-bamboo barstools, ezenza ukukhanya kunye nokomelela kwendawo yebar onokuhamba kuyo ngendlela othanda ngayo.
Enye ibha yasekhaya yesitayile sanamhlanje, le inomdla ngakumbi kukhetho lwayo lwezixhobo. Ngelixa ikhawuntari ngasemva igcinwa ilula kusetyenziswa i-laminates emhlophe ebengezelayo, olona vavanyo luphambili lokusetyenziswa kweglasi ekhanyisiweyo eneepateni kunye noburhabaxa.
Idityaniswe nendawo yokuhlala, le bar yendawo yenye yezona ndawo zifanelekileyo, ekuvumela ukuba unike iindwendwe zakho iziselo ngelixa zihlala phantsi kwaye ziphumle. Ineekhabhathi ezikhanyayo eziluhlaza ezenziwe ngomthi kunye nemiphezulu yeetafile ze-beige zegranite, kwaye ineeshelfu zokubonisa iziselo kunye neiglasi zewayini.
Le bar encinci yangaphantsi emanzi ibhajisiwe kwindawo egudileyo yodonga. Ngesefu evulekileyo, i-countertop encinci, isinki kunye nefriji, ixhotyiswe kakuhle ngobungakanani bayo.
Le bar yasekhaya intle lulongezo olugqibeleleyo kwiphedi ye-bachelor okanye kulo naliphi na ikhaya elinendawo eninzi. Ikhawuntari emhlophe yale bar inkulu ngokwaneleyo ukuba ingahlalisa abantu abali-9 kwaye ikwanayo neshelufu yokubonisa ngasemva esebenzisa ukugqibeka kobumnyama obufanayo njengeshelfu esahlula ibha kwindawo yokuphumla. Amakristali axhonywe eluphahleni nawo awongeza kubuhle kunye nokunethezeka kwendawo.
Njengalo naliphi na elinye icandelo lendlu, ibha yekhaya ifuna ukucwangciswa okufanelekileyo. Ukuqonda, ukucwangcisa kunye nokwakha kunokuba ngumsebenzi omkhulu, kodwa kuyenzeka ukuba nje ugcina iziseko ezimbalwa engqondweni. Apha ngezantsi, siwaphule amanyathelo ekwenzeni ibha yasekhaya esebenzayo kunye nefanelekileyo yendlu yakho, kunye neengcebiso onokuthi uzilandele. Nazi ezinye iingcebiso malunga nokuyila ibha yasekhaya:
Chonga ukusebenza kwebar yakho yasekhaya. Njengakuyo nayiphi na iprojekthi yoyilo, inyathelo lokuqala nelona libalulekileyo ngaphambi kokucwangciswa kukwazi injongo yendawo. Ukuchonga ukusebenza kwebar yakho yasekhaya kuya kukunceda uthathe isigqibo kulwakhiwo, uyilo kunye nakwizinto kwaye ugqibe ukuba uya kufuna ukuyigqiba iprojekthi. Ngaphambi kokuba uqale uyilo, yazi ukuba ibar yakho izakusetyenziswa njani.
Ngokucacileyo, ibha yekhaya isetyenziselwa ukonwabisa abahlobo, kodwa ngaphandle kwalonto, ngaba ikhona eminye imisebenzi oceba ukuyisebenzisela ibha yakho yasekhaya? Ngaba iya kusetyenziselwa ukulungiselela nokulungiselela iziselo kuphela, okanye ngaba uyayifuna ukulungiselela ukutya okulula? Bangaphi abasebenzisi abaya kubakho? Ufuna malini ukugcinwa? Ngaba zikhona izixhobo zombane ezithile ekufuneka zibandakanyiwe kulwakhiwo lwakho? Ngaba uyafuna ukuyisebenzisela eminye imisebenzi, njengokutya okungaqhelekanga, imidlalo kunye nokuzonwabisa? Ngaba uyafuna ibha emanzi okanye ibar yegumbi lomdlalo? Le mibuzo inokusebenza njengezikhokelo ukuze wenze uyilo lwebar yasekhaya eyenzelwe wena kwaye inokubonelela kuzo zonke iimfuno zakho.
Nangona ibha yasekhaya ayisayi kusetyenziswa mihla le, kusengcono ukuyilwa ukuba isetyenziselwe yonke imihla.
Khetha indawo endlwini apho ufuna ukubeka ibha yakho yasekhaya. Kukho iindawo ezininzi apho unokubeka khona ibha yasekhaya. Ngokwesiqhelo, imivalo yekhaya ibekwa kufutshane nekhitshi. Ikwanokubekwa kwindawo yolonwabo, kwigumbi lezemidlalo, emhadini, emqolombeni wendoda okanye kwigaraji. Ngamanye amaxesha imivalo yasekhaya ikwabekwa phakathi kwamagumbi okuhlala kunye namakhitshi, ngelixa usebenza njengokwahlula indawo.
Abanye babanini bamakhaya babeka imivalo yabo kumgangatho ongaphantsi, apho ikude khona kuzo zonke izithuthi zekhaya. Xa imivalo yasekhaya ibekwe kwigumbi elingaphantsi, inokusebenzela omnye umsebenzi kwaye inokudityaniswa nenye indawo enjengegumbi lomdlalo okanye igumbi lemidlalo yeqonga. Ukuba usebenzisa igumbi elingaphantsi njengendawo yebar yakho yasekhaya, qiniseka ukuba ayinakho ukuvuza. Ukuvuza kunye namanzi kunokubangela ukuba isikhunta sakheke malunga nebha yakho.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, enye ingcebiso ephambili ekuthatheni isigqibo ngendawo yegreenhouse yakho kukuyigcina ukufuma okugqithileyo. Khetha indawo eyomileyo ekhayeni lakho. Ukufuma emoyeni akuchaphazeli kuphela izinto ozisebenzisayo kwibar yakho yasekhaya kodwa kunokuchaphazela notywala ngokunjalo. Kwakhona, cinga ngokubonelela ngemibhobho yamanzi, ubume bombane kunye nokufumaneka kwendawo esekwe kwiimfuno zakho zebar yasekhaya. .
Cwangcisa kwangaphambili. Oku kunxulumene nokukhetha indawo yebar yakho yasekhaya. Ngaphambi kokugqibezela indawo kunye nesicwangciso, yazi iimeko ezikhoyo zesiza sendawo yebar yakho yasekhaya. Chaza amanzi akhoyo kunye nonikezelo lombane. Ezi zinto zimbini zibaluleke kakhulu kuba imivalo yasekhaya ifuna indawo yokulungiselela ngesinki kwaye ifuna umthombo wamandla wokupholisa iwayini, iifriji kunye nezinye izixhobo.
Kwakhona, qaphela uhlahlo-lwabiwo mali. Uhlahlo-lwabiwo mali luyinto ebalulekileyo kuyilo lwebar yakho yasekhaya ikakhulu kuba iprojekthi yakho ixhomekeke kuyo. Ikwavumela ukuba unciphise ukhetho lwakho lwezixhobo kunye nokugqiba. Kukwacetyiswa ukuba kulungiswe ingxowa-mali yezehlo ezinokwenzeka xa kunokwenzeka imisebenzi engalindelekanga.
Misela ubungakanani. Thatha imilinganiselo echanekileyo yendawo kwaye uqikelele ubume obuhambelana kakuhle kwaye bulingane ngokwendawo yonke. Qiniseka ukuba ibha yakho yasekhaya ayijongi njengexineneyo okanye igcwele kakhulu.
Uyilo lwesicwangciso noyilo. Uyilo kunye noyilo lwesicwangciso esilula esekwe kwindlela othanda ngayo ukuba ibha yakho yasekhaya ibonakale. Akunyanzelekanga ukuba ibe ngumzobo ojongwa njengengcali, umzobo olula wanele, okoko nje unesikhokelo onokuthi usilandele njengoko usiya phambili ngeprojekthi yakho. Qokelela ukhuthazo loyilo kwiimagazini okanye kwi-intanethi ukuze ube nembono kwinkangeleko yokugqibela, iziqwenga zefanitshala kunye nephalethi yombala ofuna ukuyisebenzisa. Ungahlala uqesha ingcali ukukunceda kwesi sigaba. Abaqulunqi banokukunika ubume befanitshala kunye nezindululo ekusebenzeni kwifomathi yokuzoba eyenza ulwakhiwo lube lula kwikontraka kuba banesicwangciso esineenkcukacha abangasilandela.
Ubume bebha yakho yasekhaya ikwayinxalenye yoyilo. Kuxhomekeka kwindawo okhoyo onayo, inokuba ngumgca omnye, isibali sebhari esinomqolo ongemva, ojiyileyo, ojikelezileyo okanye omilise uL.
Ibha yasekhaya ikwanemimandla eyahlukeneyo. Ngokwesiqhelo yahlulwe yangumsebenzi kunye nekhawuntari yokulungiselela, indawo yokukhonza, indawo yokuhlala kunye nokugcinwa. Ikhawuntara yomsebenzi yeyona nto iphambili apho ulungiselela khona iziselo kunye nokutya okulula. Indawo yokukhonza idla ngokuba yindawo yokusebenzela, okanye ingqonga ephakanyisiweyo ngaphezulu kwekhawuntari yakho yomsebenzi kwaye kulapho iindwendwe zakho zizonwabela khona iziselo zazo kunye nokutya ngokungakhathali. Indawo yokuhlala, kwelinye icala, icacile, apho kulungiswa khona izitulo zebar. Ngokwesiqhelo, ibar yasekhaya ebekiweyo ineziqwengana ezibini ukuya kwezine zezitulo zebar kwindawo yokuhlala. Indawo yokugcina inokwahlulwa ibe ziindidi ezimbini: yokugcina ebandayo kunye nendawo yokugcina eyomileyo. Ukugcinwa okubandayo kubandakanya iifriji zebhari kunye neewillers zewayini. Ukugcinwa okomileyo ziikhabhathi, iishelfu kunye needrowa ezisetyenziselwa ukugcina izinto zeglasi, izitya, iziselo ezisezibhotileni, amashwamshwam, njalo njalo. Iiraki zewayini nazo zithathwa njengohlobo lokugcina olomileyo.
Thatha isigqibo kuyilo lwebar. Zininzi iintlobo zoyilo lwebha yasekhaya umntu anokuluhlola. Ingaba yibha emanzi okanye ibha yasekhaya ebandakanya isinki kulwakhiwo. Inokuba ngumdlalo webar, okwajongana nemisebenzi yolonwabo okanye inokuba yindawo ephathekayo, enokususwa ngokulula kwaye igcinwe kude ngokukhawuleza xa ingasetyenziswa. Ngenye indlela, unokuba nayo ibha epheleleyo ukuba indawo ekhoyo iyavuma. Imivalo yangasemva epheleleyo igcinelwe umntu ngamnye iibhotile. Uyilo lwebar luya kuphinda, luxhomekeke ekusebenzeni kwebar yakho yasekhaya kunye nendawo ekhoyo onayo ekhaya.
Khetha isitayile sebha yakho yasekhaya. Ngokufanelekileyo, xa uqikelela isicwangciso sokugqibela sebar yakho yasekhaya, khetha uyilo oluhambelana nesimbo esixhaphakileyo sekhaya lakho. Ibha yakho yasekhaya kufuneka idibane ngokudibeneyo nangokudibana kunye nayo yonke eminye imimandla yendlu.
Izinto kunye nokugqitywa kuya kukunceda ufezekise ukujonga okufunayo kunye nokuthungwa kunye neetoni zebar yakho yasekhaya. Ungasebenzisa iinkuni ukuziva zakudala, ngelixa indlu yakho ingeyangoku, ungahamba nomhlaba ocekeceke kunye nobengezelayo. Iphalethi yombala webha yakho yasekhaya akufuneki iphambuke kwiskimu esele sikhona sekhaya lakho. Ukuba indlu yakho idlala ngokungathathi hlangothi, intonga eneethoni ezinombala othile ukuze ibar yakho yasekhaya ingajongi endaweni.
Ububanzi obuqhelekileyo, ubungakanani kunye nokuphakama kubalulekile ekuyileni ibha yasekhaya kuba iyanceda ekufezekiseni ukusebenza ngokukuko. Xa ibha yakho yasekhaya icwangcisiwe ngokwemilinganiselo enjalo, uyilo olululo lwe-ergonomically kunye noyilo lwe-anthropometrically luyaphunyezwa.
Ukuphakama kokuphakama okuthe tye, umzekelo, kukuvumela ukuba uhambe malunga nokulungiselela ukutya kunye neziselo ngokulula nangokulula. Ubunzulu obufanelekileyo be-counter buya kubonelela ngegumbi elaneleyo leziselo, amashwamshwam kunye nokutya okuqhelekileyo kunye nokuzonwabisa. Ubuncinci kunye nobunzulu bekhabhinethi ubunzulu kunye nobubanzi bukuvumela ukuba wenze okuninzi kwisitoreji sakho. Ukucaca okwaneleyo kuphucula ukuhamba kwezithuthi ngaphakathi kwendawo. Ngokubanzi, baphucula ukufikeleleka, babonelele ngokulula kwaye benze ukuhamba komsebenzi kusebenze ngakumbi
Nantsi eminye yemilinganiselo esemgangathweni efunekayo ekuyileni imivalo yasekhaya:
• Ubuncinci umphakamo wezinto zokubala zebar yasekhaya zii-intshi ezingama-42. Ukuphakama kusekwe kubude obuphakathi kwabantu abaninzi kwaye kufanelekile ukusebenza, ngaphandle kokugoba ngelixa usetyenziswa.
• Ubuncinane bemitha yokulalisa izitulo zebhari ukusuka kwii-intshi ezili-10 ukuya kwezili-12. Oku kuvumela abantu ukuba bahlale kamnandi ngaphandle kokungqubeka kwipaneli yangaphambili yebha. Kwiibali zebar zasekhaya ezingenazo izitulo okanye ezimileyo kuphela kwimivalo yekhaya, ubunzulu bunokuncitshiswa bube zii-intshi ezi-6 ukuya kwezi-9.
• Ubunzulu bomgangatho webala lasekhaya zii-intshi ezingama-24. Oku kukhawuntara yomsebenzi okanye kwicala le-bartender yebar, nangona kunjalo le milinganiselo inokuhlengahlengiswa kuxhomekeke kukhetho lwakho. I-countertop kufuneka ibe nkulu ngokwaneleyo ukuba ingene kwisinki, ukuba iyafuneka, kodwa ingabi nzulu ngokwaneleyo ukuba ungakwazi ukufikelela kuyo. Izinto zokubala ezingena-intshi ezi-18 intshi zanele ukuba ufuna kuphela indawo yokusebenza yokulungiselela iziselo. Ngokwesiqhelo, oku kuyandiswa kuye kwii-intshi ezingama-20 ukuya kuma-24 ukuvumela indawo engaphezulu yokulungiselela kunye nokulungiswa okukhulu. Ikhawuntari yomsebenzi idla ngokuba zii-intshi ezili-12 ezantsi kune-top bar.
• Ubude bebhari yekhaya zii-6 ukuya kwi-8 iinyawo. Umlinganiso ochanekileyo uya kuxhomekeka kwindawo ekhoyo kunye nenani labasebenzisi.
Indawo eyoneleyo yomntu ngamnye ziisentimitha ezingama-60 okanye ii-intshi ezingama-24 okanye ii-2 zenyawo (Oku kuluncedo ekumiseleni ubude bebari yakho yasekhaya. Umzekelo, ukuba uceba ukuba nebha enokuhlalisa abantu abathathu, ubude bebonke ikhawuntala yebha yasekhaya kufuneka ibe ziinyawo ezi-6. Oku kuthathwe ekuphindaphindeni iinyawo ezimbini zii-3 zabantu). Lo mlinganiselo unokuhlengahlengiswa ukuya kwii-intshi ezingama-30. Ukongeza koku, vumela ubuncinci ii-intshi ze-14 ukusuka embindini wesitulo sokugqibela eludongeni
• Ukuphakama kwesitimela seenyawo kwibar yasekhaya zii-intshi ezili-9 ukusuka phantsi.
• Ubungqingqwa obuphezulu bekhawuntari kwimivalo yekhaya zii-intshi ezi-2.
• Izitulo zebar zihlala zii-intshi ezingama-29 ukuya kuma-32 ubude.
Ngokusisiseko, nayiphi na into esetyenziselwa izixhobo zokubala zasekhitshini inokusetyenziselwa ii-countertops zebar. Ukukhetha kwakho imathiriyeli yetafile yokuphanda kuya kuxhomekeka kakhulu ekusebenzeni kunye noyilo ofuna ukulifezekisa kwibar yakho yasekhaya. Imathiriyeli nganye ineempawu zayo ezilungileyo nezingalunganga kunye nomtsalane wazo wobugcisa omangalisayo. Nazi ezinye zezinto eziqhelekileyo zokubala ezisetyenziselwa imivalo yasekhaya:
Granite - I-Granite ayisiyonto ethandwa kakhulu yokuphela kwekhitshi kuphela kodwa ikwayinto esetyenziswayo kakhulu yokuphamba ibha. Luhlobo lwelitye lendalo elenziwe nge-quartz, feldspar kunye ne-mica. Le indibanisela eyodwa yeeminerali inika inyengane ngobuhle bayo obukhethekileyo kunye nobulukhuni.
Esinye sezizathu eziphambili zokuba igranite yinto ethandwayo yokuphala imiphezulu yeetafile kungenxa yesibheno sayo sobuhle esikhethekileyo. Uhlobo ngalunye lwegranite lunezinto ezahluka-hlukeneyo ezinamachaphaza amnyama, amachaphaza amnyama, imithambo kunye nemithambo, ngelixa umbala wayo usukela kwezona ndawo zingacacanga ukuya kwiitoni ezicebileyo. Ngokubanzi, inyengane inika imivalo yasekhaya isibheno esithandekayo nesinomdla. Eyona nto ifanelekileyo ukuba ufuna ukwenza iprojekthi yobutyebi kunye nobuhle kwibar yakho yasekhaya.
ngowuphi umnwe omsesane
Ngaphandle kwe-aesthetics, inyengane ikwaqwalaselwa njengeyona ndawo yomeleleyo yamatye endalo. Njengoko besitsho, inzima njengelitye. Ngokwemvelo ukunganyamezeli kobushushu - iimbiza zekofu, iipani ezishushu, iisigarethi kunye neetreyi ezivela ehovini aziyi kuyonakalisa. Ikwayinto enganyangekiyo kwaye inokuma kusetyenziso lwemihla ngemihla. Nangona kulula ukuyigcina, imiphezulu yeetafile zentsimbi yegranite ngamanye amaxesha zinokungcolisa kulwelo oluchithekileyo, kubandakanya notywala. Nangona kunjalo, oku kunokuthintelwa ngokugcinwa kokuthintela. Sula nayiphi na into engamanzi ngoko nangoko ukuze ingangeni ematyeni. I-Granite inovakalelo kwizinto ezinomhlaba, ke qiniseka ukuba i-countertop yakho ye-bar ilungile kwaye itywinwe rhoqo ngaphambi kokusetyenziswa.
Ukuba ufuna i-countertop ehlala ixesha elide kwibha yakho yasekhaya, i-granite yinto efanelekileyo yokukhetha. Ngaphandle kokuba itywinwe ngokufanelekileyo kwaye igcinwe kakuhle, imiphezulu yeetafile zegranite zinokuhlala amashumi eminyaka ezenza ukuba ibe lulondolozo lobulumko. Ngokomndilili, i-countertop ye-bar ye-granite inokusetha i-20 ukuya kwi-100 yeenyawo ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kuhlobo, umbala kunye nephethini yento leyo.
Quartz -I-Quartz luhlobo lwelitye eliyinjineli elenziwe ngomxube we-93% ye-quartz etyunyuziweyo kunye ne-7% ye-epoxy resins. Ukongezwa kwee-epoxy resins esekwe kwi-quartz etyunyuziweyo kunye nokuncamathelisa amasuntswana ngokudibeneyo, ukomeleza ukomelela kunye nokuqina. Ukunika umbala kulo mbandela, ii-pigment zongezwa kumxube. I-Quartz iza kuluhlu olubanzi lwemibala kwaye uyilo lwayo lufana kakhulu nokubonakala kwamatye endalo njengemabhile kunye negranite.
Ngokusisiseko, i-quartz yomelele kunelitye lendalo, kodwa intle ngokulinganayo. Xa kuthelekiswa nemiphezulu yeetafile zamatye endalo, i-quartz ifuna ulondolozo oluncinci, iyamelana nobushushu kwaye ayikrweli ngokulula. Ngokungafaniyo nelitye, ayifuni kutywinwa.
Uyilo kunye nokuthelekiswa kwencwadi nako kulula, kuba i-quartz ayizi kwi-slabs eneepateni ezahlukeneyo. Utshintsho lombala kunye neepateni kunokwenzeka ukuba zibekho, kuba zenziwe ngabantu kwaye ayizizo ezendalo.
Kuba inqabile kakhulu kumabala, i-quartz ilunge kakhulu ukuba isetyenziswe njenge-bar countertop kuba ngekhe yonakaliswe kukuchitheka kolwelo notywala. Kwakhona, inomphezulu ogudileyo kwaye uqinile owenza ukuba umsebenzi wokulungiselela ube lula.
Xa kuziwa kwiindleko, i-quartz ibiza kakhulu kune-granite, nge-avareji ye- $ 70 ukuya kwi-90 yeenyawo ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kuhlobo. Ikhawuntari esisiseko ye-quartz ixabisa i-60 yeedola ngonyawo wesikwere, ngelixa i-quartz ephezulu ibiza ukuya kuthi ga kwiidola ezili-100 ngonyawo wesikwere.
Umthi oqinileyo -Ukuba ufuna ukubukeka kweklasikhi kwibar yakho yasekhaya, ke isitopu sokhuni lukhetho olufanelekileyo kuwe. Imivalo yesiko ihlala yenziwe ngomthi, ngakumbi i-mahogany kwaye ibonakalisiwe ukuba ihlala iminyaka. Eyona nto intle malunga nomthi kukuba yenziwe ngokwezifiso kakhulu kwaye inokubunjwa ngayo nayiphi na indlela, ubungakanani kunye nesitayile. Inokugqitywa ngepeyinti, amabala okanye ide ishiye imeko yayo yendalo (kodwa itywinwe) eyenza ilungele nasiphi na isitayile yoyilo. Ukongeza koko, ubuhle bendalo bemithi abunakuthelekiswa nayo nayiphi na enye into. Inegalelo kwimvakalelo yokuqina eyenza ukuba iindawo zifudumale ngakumbi, ziphumle kwaye zimeme.
Xa usebenzisa iinkuni kwi-countertop yakho yasekhaya qiniseka ukuba usebenzisa i-sealer phezulu kuba isengozini kumanzi kunye nomonakalo wamanzi. Kwakhona, thintela ukubandakanya isinki kwindawo yakho yokupakisha bar xa usebenzisa iinkuni kuba kuthelekiswa nezinye izinto zomthi zisathambile. Umthi ngokwendalo uthanda ukubumba, ukungunda nokubola xa uvezwe ukufuma. Ikwanotyekelo lokulujija, ukwandisa okanye ukukrwempa, ke qiniseka ukuba zonke ezi ngxaki zijongiwe ngaphambi kokusetyenziswa.
Kwi-avareji, i-countertop yeplanga eqinileyo yokhuni ibiza i- $ 30- $ 60 ngeenyawo zenyawo. Imiphezulu yeetafile zebar ezenziwe ngomthi zingabiza kakhulu ukuba zenziwe ngokwesiko kwaye zigcwaliswe ngokukhethekileyo kunye nokugqiba. Nangona kunjalo, ukuba unayo italente kwaye unokuzibandakanya kwiprojekthi ngokwakho, ke iindleko zinokunciphisa kakhulu, zenze ukuba zifikeleleke ngokufanelekileyo.
Ngokubanzi, ukhuni oluqinileyo lukhetho olufanelekileyo kwiitafile zokubala, ngakumbi xa igqityiwe kubungakanani bee-intshi ezi-1. Ezinye zeentlobo zeenkuni ezithandwayo ezisetyenziselwa imiphezulu yeetafile zebherita yicherry, iteak, imnathi kunye nom-oki
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -Intsimbi engenasici ifunyanwa ngokuxhaphakileyo kwimivalo yekhaya yanamhlanje kunye noshishino. Olu hlobo lwezinto zokubala i-bar countertop bubushushu kunye nokukrala okunganyangekiyo. Isinyithi engenasici nayo ipholile ekuchukumiseni kwaye igudile kwaye yomelele, eyenza ukuba ibe lilungiselelo elifanelekileyo kunye nendawo yokusebenza. Kwaye ekubeni imivalo yasekhaya isetyenziswa ngokulula, imiphezulu yeetafile yentsimbi eyenziwayo iyaziwa ukuba ihlala ngonaphakade, ukuba ifakwe kakuhle kwaye igcinwe kakuhle.
Isizathu esona sizathu sokuba kutheni isebenza kakuhle njenge-bar countertop kuba kungenakwenzeka ukuba ibala. Ukugcina ulwelo kuncinci ekukhathazekeni kwakho. Nangona kunjalo, iindawo zamanzi kunye neempepha zeminwe zingashiya amanqaku kulolu hlobo lomhlaba, ngoko kunokufuna ukusula rhoqo ukuze kubonakale kukuhle. Ukuba utywala okanye naluphi na olunye uhlobo lwesiselo luyasasazeka ngaphaya kwekhawuntara yentsimbi engenacici, lunokucocwa ngokulula kusetyenziswa isiqwenga selaphu.
Iindleko ngobulumko, insimbi engenasici ibiza kakhulu kwaye ixabisa malunga ne-100 ukuya kwi-200 yeedola kwinyawo nganye kwisilinganiso.
Iithayile -Iithayile zezinye izinto zemveli zokubala imivalo yasekhaya. Ingaba yiporcelain okanye i-ceramic. Iithayile kulula ukuzicoca, zihlala ixesha elide kwaye ziza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo, imibala kunye neepateni. Njengama-laminate, iithayile azibizi, zibiza imali encinci njenge- $ 10 ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kubungakanani, uhlobo kunye noyilo.
Nangona iithayile zinokusetyenziswa njengendawo yokubaleka imivalo yasekhaya, ziza ngoncedo kwaye mhlawumbi yenye yezinto ezincinci onokuzisebenzisa, ikakhulu ngenxa yemigca ye-grout. Eyona ngxaki iphambili kwiithayile zivela kwi-grout, njengokuchitheka, ukungcola kunye nokunye ukungcola kunokungena kwezi seams kwaye kunokuba nzima ukuzicoca. Imigangatho yethayile kunokuba lula ukuyicoca, kodwa imigca ye-grout ifuna ukongezwa okongeziweyo. Kwakhona, ithayile yindawo engalinganiyo, ke ayikhuthazwa into yokutyibilika kwiiglasi zecocktail.
Ingcebiso yoMyili: Nangona iMarble yenye yezinto zokubala onokuziphanda, xa kufikwa kumba wee-countertops, azicetyiswa. Zinobunewunewu, zityebile kwaye zinobunkunkqele, kwaye zigudile nakuchukumisayo nazo, kodwa ngokubanzi ziyasilela xa kufikwa kumba wokuchasana nolwelo. Kuba ibar yasekhaya ibonakaliswa rhoqo emanzini, etywaleni nakwezinye izinto ezingamanzi, kubalulekile ukuba imathiriyeli yestafile ingabi yimivumba. I-Marble iphosa kakhulu kwaye iyakwazi ukutshabalalisa ngokulula ngotywala. Phakathi kweetafile zamatye zendalo, zezona zibuthathaka. Xa kuthelekiswa negranite, ithambekele ngakumbi ekuqhekekeni nasekucofeni.
IiLaminates - IiLaminates luhlobo lwezinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukugubungela iinkuni. Eyaziwa ngokuba yiFomica, ii-laminates zenziwe ngamanqanaba ezixhobo ezihlanganisiweyo. IiLaminates ziveliswa kwimakhishithi ebhityileyo kodwa azinakho ukomelela kunye nokuqina ngenxa yokwakheka kwezinto ezibonakalayo. Uluhlu oluphezulu lwee-laminates lwenziwe ngothango lwe-melamine resin. Ngaphantsi komaleko ophezulu, ngumaleko wokuhombisa oqukethe ipateni, uyilo, ubume kunye nombala we-laminate. Uluhlu lwayo oluphambili lwenziwe ngephepha leKraft eliqiniswe ngee-resins, ngelixa umaleko wokunxiba wenziwe ngokudityaniswa kwephepha, i-aluminium oxide kunye ne-melamine resin. I-Laminate ihlala incanyathiselwe ngaphezulu kwezinto ezomeleleyo ukuphucula umgangatho wayo kunye ne-aesthetics. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa iplywood okanye i-substrate yokhuni.
Imiphezulu yeetafile elaminethiweyo lukhetho lobulumko kwimivalo yekhaya kuba ihlala ixesha elide. Iyakwazi ukumelana nokuguga kunye nokusetyenziswa, kwaye kunye nokhathalelo olufanelekileyo kunye nofakelo, imiphezulu yeetafile elaminethiweyo inokuhlala iminyaka engama-20 ukuya kwengama-30. Kukwabiza ixabiso eliphantsi, kubiza malunga ne- $ 5 ukuya kwi-25 yeenyawo ngonyawo wesikwere.
Ngaphandle kwezibonelelo ezibonakalayo, ii-laminates zikwanokuhluka. Xa kuziwa kuyilo, imiphezulu yeetafile elaminethiweyo inika uluhlu olubanzi lokukhetha olunokuhambelana nasiphi na isimbo yoyilo lwebar yasekhaya, nokuba inokuba yeyesiko, iMeditera, irustic, yanamhlanje okanye yanamhlanje. Iyafumaneka kwimibala ebanzi yemibala, uyilo kunye noburhabaxa. Ezinye ii-laminates zikulinganisa ukubonakala kwezinto zendalo ezinje ngomthi kunye nelitye, ke inokusetyenziswa njengenye indlela ukuba ufuna ukusika kwiindleko kodwa ufezekise uyilo olufanayo lobugcisa. Imiphetho yekhawuntara yebha elaminethiweyo nayo inokugqitywa ngeewvels, amagophe ngokuxhomekeke kukhetho lomntu.
Nangona kufanelekile ukuba isetyenziswe njengendawo yokubaleka ibha yasekhaya, imiphezulu yeetafile elaminethiweyo nayo ineengxaki ezininzi. Zinovakalelo kukuvezwa kakhulu emanzini. Izinto ezingamanzi ezichithekileyo ezinje ngotywala zinokungena ngaphakathi kwaye zivelise umonakalo, nangona kunjalo, oku kunokuthintelwa ukuba oko kuchitheka kusuliwe ngaxeshanye.
Ukuba usebenzisa i-laminates kwi-countertops ye-bar, kuyacetyiswa ukuba isetyenziswe kwizibali zokubala okanye kwindawo yokusebenza.
Imigangatho eqinileyo - Eyaziwa nangokuthi yiCorian, imiphezulu eqinileyo yenye yeendlela zangoku zebar yesintu kunye nezinto zokulwa nekhitshi. Yinto eyenziweyo ehambelana nayo yonke indawo, oko kuthetha ukuba umphezulu, umbindi, ezantsi kunye nomphezulu ziyafana. Umphezulu oqinileyo wakhiwe ukuze ujongeke njengelitye kodwa zongeze izibonelelo xa zisetyenziswa.
Esona sizathu siphambili sokuba kutheni umphezulu oqinileyo wenze iitafile ezilungileyo kwimivalo yasekhaya kungenxa yokuba le nto ayisebenzi. Ngokungafaniyo nelitye, imigangatho eqinileyo ayifunxi ulwelo, ngenxa yoko azithambekeli kubhaktheriya eyakhayo, ukungunda kunye nokungunda. Imiphezulu yeetafile yomgangatho oqinileyo nayo yomelele kakhulu kwaye inokuhlala iminyaka. Kulula ukuzicoca, zifuna ukosula okuncinci usebenzisa ilaphu okanye itawuli yephepha ngesicoci, kwaye ziyamelana namabala avela kulwelo nakwezinye izinto. Olunye uncedo kukuba banomphezulu ogudileyo, ofanelekileyo wokumisela iiglasi kunye nokusela iziselo.
Icala elisezantsi lomphambili womgangatho oqinileyo kukuba awunakunyibilika, nangona kunjalo le mingxunya ingalungiswa ngokulula ngesanti encinci kunye nokuhluza. Kwakhona, ukuba uyilo lwakho lwebha yasekhaya lusebenzisa ukugqobhoza ukubambelela kwizitulo zebar kunye nendawo yedolo, oku kunokuba kungabi lukhetho olufanelekileyo. Oku kubangelwa kukuba indawo eqinileyo inomdla wokuqhekeka phantsi kobunzima obunzima, ngoko ke ukuba i-countertop yakho yasekhaya ibambe ngaphezulu, qiniseka ukuba i-countertop yakho eqinile i-cantilevered kunye nenkxaso eyongezelelweyo.
Uyilo lobulumko, indawo eqinileyo iyafumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala, eyenza ukudibanisa kunye nokuthelekisa kungabi yingxaki. Inokutshatiswa kunye noyilo lwasekhaya kunye nolwanamhlanje lwebhayile yoyilo, kwaye banegalelo ekuviweni okutyebileyo kunye nokunethezeka kwindawo.
Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokubala i-bar countertop, iindawo eziqinileyo zibiza kakhulu. Ngokwesiqhelo, baxabisa i $ 50 ukuya kwi-120 yeenyawo ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kuyilo, umbala kunye nomenzi okanye uphawu. Olu hlobo lwezixhobo lufuna iinkonzo zobungcali xa kufikwa kufakelo.
Ikhonkrithi -Iitafile zekhonkrithi zixhaphake ngakumbi kuyilo lwebar zasekhaya zale mihla. Yenziwe ngumxube wesamente, igrabile, isanti kunye namanzi. Izixhobo zokubala eziphathekayo zifana nokubonakala kwelitye lendalo kwaye zihlala zihlala kwifom ebunjiweyo. Izinto zokubala zekhonkrithi ezihanjisiweyo zisiwa kwindawo inyange ngokupheleleyo kwaye igqityiwe kwaye ifuna nje ukufakwa. Ubungqingqwa obuqhelekileyo bokubala kweekhonkrithi zebar ziyi-1 and intshi kwaye zinokwenziwa nakweliphi na ubude.
Ikhonkrithi inyibilikile kodwa yakuba ihonjisiwe yatywinwa, iba bubala kwaye iyamelana namanzi. Ihlala ixesha elide kakhulu kuba ihlala iqiniswa ngocingo, i-rebar yesinyithi okanye i-fiberglass fibers ukongeza amandla. Ukongeza kuloo nto, ikhonkrithi ikwimo eguqukayo, inokubunjwa ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo kwaye inokungcoliswa ngemibala eyahlukeneyo ngokongeza ii-pigment ngexesha lokuxuba.
Iitafile zekhonkrithi zekhonkrithi zibiza i-85 yeedola ukuya kwi-100 yeenyawo zenyawo nganye kwaye zihlala iminyaka engama-50.
Epoxy kunye nentlaka -Ukuba ufuna ukuhamba nento yokuhombisa kunye neyodwa kwi-countertop yakho, unokuzama ukuphonononga i-epoxy kunye nentlaka. Ipoxyxy nentlaka yinto ecacileyo, etyebileyo ethululelwa ngaphezulu kwezinye izinto. Xa iqina, imveliso yokugqibela yindawo egudileyo, enzima kwaye eqinileyo ehlala ixesha elide. Umahluko ophambili onawo ngokubala amatye endalo kukuba nantoni na engaphantsi kwentlaka inokubonwa ngokucacileyo kwaye okubaluleke ngakumbi, ayinamanzi. Ke, ngokusisiseko, le nto iyasetyenziswa ukuba ufuna ukuguqula izinto ezizodwa zibe yindawo esebenzayo eqinileyo- njengemali eziinkozo, ikhadi lokurhweba, imifanekiso, njl. Njl. ufuna ukususa ezo ngxaki zinemigca ye-grout ebamba ukungcola.
Olu hlobo lwee-countertop zebar lusebenza kakuhle kwimivalo yekhaya elandela umxholo. Kwimivalo yekhaya enezinto ezinomxholo, ungasebenzisa amakhadi okurhweba okanye ezinye iimemorabilia zesandwich. Ukuba ufuna ukubonisa ingqokelela, njengeikhokho ezivela kwiibhotile zewayini okanye izitampu, le yindlela elungileyo yokuyibonisa kwibar yasekhaya ngelixa uyigcina ngaxeshanye.
Iiphephethi zokubala ze-epoxy kunye ne-resin ziyimichiza enokumelana nomsebenzi onzima. Kukwanamabala kwaye intsholongwane iyamelana, kulula ukuyicoca kwaye inobomi obuncinci beminyaka eli-10.
Lo mmandla wale bar wale mihla awungqinelani nebha yeziselo kunye neecocktails. Ikwasebenza njenge ikhitshi elincinci lokubonisa apho unokupheka khona xa usonwabisa iindwendwe. Ukulandela umxholo wanamhlanje wezinto zangaphakathi, indawo yebar ekhitshini isebenzisa izinto zokubala ezinamanzi kunye neekhabhathi, kunye nesipheki sokwakha esakhelweyo kunye nesinki. Udonga lwe-accent lugqityiwe ngeethayile zesileyiti ukongeza ubume obuncinci kunye nobuntu kwisithuba.
Ngombono omhle, ngokuqinisekileyo uya kuba nexesha elihle lokuphumla kweli khaya, ngakumbi nge-mini bar ukuze uzenzele i-martini ngelixa ubukele ukutshona kwelanga. Oku igumbi lokuhlala elinobunewunewu Isithuba sinendawo elula yokukhanya yetropiki, enemigangatho yeebheyi ekhanyayo kunye neendonga ezimhlophe. Ikhawuntari yebha ilandela umxholo ofanayo kunye nekhawuntari yayo emhlophe kunye nesibane sokukhanya esimalunga ne-beige kunye nesitulo esilinganayo esine-beige yesikhumba.
Indawo etyebileyo yebar yangoku ekhangeleka ngathi yindawo yokwamkela ihotele yale mihla. Ikhawuntari emnyama yebar ye-quartz imile simahla ngokuchasene neekhawuntara eziqhelekileyo ezakhelwe-ngaphakathi kwaye ine-x-milenze yentsimbi engenasici. Ifom yebha inesakhiwo esihle sejometri kwaye idityaniswe nezibane zeglasi ezi-5 kunye neendonga zangasemva ezenziwe ngasemva, zenza imbonakalo entle yanamhlanje.
Ibonisa uyilo olwahlukileyo lwala maxesha, le bar yekhaya ngokuqinisekileyo iya kuba yinto efanelekileyo. Ine-shelf / ikhabhathi yokubonisa umgangatho we-wine kunye nezinye iziselo kwaye ine-counter bar yesiqithi enekhawuntari esezantsi esebenzisa i-granite emnyama kunye nekhawuntari ephezulu necekeceke eyenziwe nge-laminate efanayo yomthi we-zebra njenge shelufu yokubonisa.
Le bar yekhaya inkulu ngokwaneleyo ekhitshini eligcweleyo, elinamakhabhathi enziwe nge-oki eqinileyo kunye nophahla olusebenzisa ukugqitywa komthi oki. Inendawo yokubeka into emnyama emnyama kunye nokudibanisa izixhobo ezakhelwe-ngaphakathi kuyilo lwekhabhinethi. Ndwendwela eli phepha legalari ukongeza izimvo zomqolomba omncinci .
apho ebhayibhileni ithetha ngomtshato
ndingalitshintsha igama lam xa nditshata
Ukutshintsha kwegama emva komtshato virginia
Izipho ezimangazayo zomyeni ngomhla wokuzalwa kwakhe
ubhala kanjani umtshato enkosi khadi
iingoma zelizwe ukuhamba ezantsi kwindlela
imibala yeebhokhwe ezimfusa iilokhwe